आज हामी सिक्छौं कि कसरी पश्चिमी गोलार्धबाट अद्भुत मिठाई तयार पार्नु - "कोलिब्रिरी" केक। जेमी ओलिभर, धेरै टिभी परियोजना "नग्न शेफ" मा जानिन्छ, दयालु रूपमा एक नुस्खा प्रदान। हामी सबैलाई सोध्दछौं जुन हाम्रो प्रकाशन पढ्ने सामेल हुन र चायको लागि मूल र आश्चर्यजनक स्वादिष्ट नवीनता संग आफ्नो परिवारलाई प्रभाव पार्न चाहन्छ।
यो केकको लागि के हो?
प्रस्तुत मिठाई उल्लेखनीय छ कि यो 1978 मा केंटकी मा राज्य मेला मा एक पुरस्कार जीता। पहिले, 19औं शताब्दीको बीचमा, कोलिब्री केकले दक्षिण अमेरिकाका देशहरूमा ठूलो सफलता पायो। निष्पक्षमा मान्यताको वर्षमा, एक मिठाईको नुस्खा अमेरिकाको पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको थियो र तुरुन्तै अमेरिकन नागरिकको भनाइ थियो। त्यस पछि देखि, मिठाईले पश्चिमी गोलार्धका देशहरूमा आफ्नो स्थिति गुमाएको छैन, यसबाहेक युरोपेली परिवारको तालिकामा सारियो।
निस्सन्देह, एक धनी इतिहास भएको, केक "कोलिब्रिरी", जुन हामीले तल प्रदान गर्नेछौं, तर सबै प्रकारका परिवर्तनहरूको अधीनमा हुन सकेन। धेरै मालकिन, आफ्नो कौशललाई सम्मान गर्दै, यो मिठाईको लागि विभिन्न क्यान्सर तयार गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तथापि, शास्त्रीय, गैर संशोधित चीजहरू अझै पनि बाँकी छन्। एक अखरोट पूरकको रुपमा, एक फ्याँक पेन पारंपरिक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, एक फल को अंश - केला शुद्ध र कटा अनानास।
केक "कोलिबिरी" जस्तै सबै सूखी बिस्कुट मन नपर्ने, जस्तै फलको यो डिशमा, परीक्षा भन्दा पनि भन्दा बढी। मूल केक एक दुई तहको केक हो, कसैले3वा अन्य तहहरू प्रयोग गर्न प्रयोग गर्यो। अमेरिकन क्रीम पनीर एक चमक को रूप मा प्रयोग गर्दछ । जेमी ओलिभरले एकदम झण्डा को रचना को व्याख्या गरे, जसबाट देखि उनको पाक कलात्मक र अधिक स्वादिष्ट भयो।
ब्रिटिश मालिकले डिशको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
"नग्न शेफ" ले प्राय: आफ्ना विचारहरू र टिप्पणीहरूको बारेमा यो वा त्यो डिशलाई साझा गर्छ। मास्टर केक "कोलिबरी" को विचारहरू के हो? जेमीको समीक्षाहरूले एक असामान्य डिश एक अद्भुत स्वाद बाहिर निकाल्छ। पहिलो टुक्रा काट्न यो मात्र आवश्यक छ, तपाईंको अनुहारमा मुस्कान देखा पर्नेछ। तर जब तपाईंको मुखमा स्वादिष्ट पाकको टुक्रा हो, एक व्यक्तिले यो स्वादको साँचो पूर्णता हो भनेर बुझाउँछ।
केक "कोलिब्री": फोटो संग एक नुस्खा। बकिङ सामग्री
यी अवयवहरूको 14 सर्भर हुनुपर्दछ। यहाँ परीक्षणका लागि आवश्यक उत्पादनहरूको पूर्ण सूची यहाँ छ:
आटा पैनकेक - 350 जी;
केलास ओभरिपे -4टुक्राहरू;
चिकन चिकन अन्डा -2टुक्राहरू;
डिब्बाबंद अनानास - 1 सक्छ (425 मिलीलीटर);
Pecans - 50 g;
पाउडर गरिएको चीनी - 350 ग्राम;
Vanilla - 1 चम्मच;
समुद्री सागर - 1 ठूलो चुटकी।
यो ध्यान दिनु पर्छ कि मोल्ड स्नेह गर्न तपाईंलाई थप जैतून को तेल चाहिन्छ। केलास औसत आकार छान्नुहोस्। हामी यो पनि नोट गर्दछ कि यस्तो पेनकेक आटा जस्तै एक उत्पाद को बढती सम्पत्ति को छ। अब केक "Hummingbird" लाई सजाने को लागी शीशा को लागि सामाग्री मा जाएं। हामीलाई चाहिन्छ:
मक्खन (अज्ञात) - 150 ग्राम;
पाउडर गरिएको चीनी - 400 ग्राम;
चूना -2टुक्राहरू;
चमक बनाउनको लागि तेलको कोठाको कोठा हुनुपर्छ। ठीक छ, केक सजाने को लागि, हामी केहि अधिक घटक को आवश्यकता हुनेछ:
Pecans - 50 ग्राम;
पाउडर गरिएको चीनी - 100 ग्राम।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, नुस्खा पूर्ण रूपमा चीनी र साधारण गेहूंको आटाको कमी छ। खैर, उत्पादनहरू तयार छन्, यो खाना पकाउनुको समय हो। सायद, कसैले पहिले नै असामान्य र मौलिक स्वाद अनुमान गर्दछन्।
पहिलो कुरा हामी गरिरहन्छौं ओवन माथि छ, जहाँ केक "कोलिब्री" केही मिनेटमा जान्छ। जेमी ओलिवरले तर्क दिए कि भान्साले ओवनमा ढुवानीको बाटोमा शौकिया पाकिनको लागि कुनै पनि कठिनाइको कारण नगर्ने हुन्छ। वैसे, ओवन 180 डिग्री सम्म गरम गर्न आवश्यक छ, र अधिक। 23 सेन्टिमिटर व्यासको साथ2बेकिंग बर्तन तयार पार्नुहोस्, ज्वरो तेलको साथ पेन्चमेंट पेपर लिनुहोस् र दुबै कन्टेनरहरू राख्नुहोस्।
हामी आटा बनाउँछौं। पेनकेकको आटा दालचीनीको साथ एक चुरोट मार्फत सिफित हुनुपर्छ। अब आटाको लागि चिनी पाउडर र समुद्री नमक जोड्नुहोस् । एक अलग कटोरा मा, पाक केले छीलें र चिकनी मासुद सम्म सम्म एक कांटा संग माछा। डिब्बाबंद अनानास सूखेको रूपमा र स्लाइसमा काट्न सकिन्छ।
वैसे, केक "कोलिब्रि" मा, अब हामी नुहाउने तालिम पाइन्छ, तपाइँ ताजा अनानास थप्न सक्नुहुन्छ।
कटाई अनानास एक कटोरा को केला शुद्ध मा पठाइन्छ, र त्यसपछि त्यहि कंटेनर मा हामी जैतून को तेल, अण्डा र वाइनिलिन जोडछन। हामी डिशको फल भाग मिलाउँछौं। अब यो सुक्खा मिश्रण र फल संयोजन गर्न समय छ, र संरचनामा pecan पनि थप्नुहोस्। न्यूक्लीली एक चाकू संग काटने को लागि राम्रो तरिकाले तैयार छ, तर तपाईं रोलिंग पागल संग पुरानो राम्रो, साबित विधि को उपयोग गर्न सक्छन्।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, आटा धेरै छिटो तयार छ र हामीले मिक्सरलाई समेत चाहिँदैन। यो ढाँचामा समान रूपमा आटा डाल्न र 35-40 मिनेटको ओवनमा केक "कोलबिरी" पठाउँछ। केक ओवनबाट बाहिरिएपछि, चाकूको कुखुराको छेउमा मोल्डको पछाडिको सतहको सतहहरू अलग गर्नुहोस्, तथापि, सामग्रीहरू 10 मिनेटसम्म नभएसम्म हटाउन नदिनुहोस्। यस समयमा, पकाउने केक हल्का ठुलो हुनेछ र समाधान गर्न सक्षम हुनेछैन। तदनुसार, केकको उपस्थिति अक्षांशमा हुनेछ।
केक "कोलिब्रिरी": जमी ओलिभर बाट पाठक। खाना पकाउनुहोस्
र अब मिक्सर आवश्यक पर्नेछ। पाउडर गरिएको शर्कराको कटोरामा सिफ्ट गर्नुहोस्, एक नरम तेल र एक रसदार फोममा हान्नुहोस्। अब क्रीम पनीर कन्टेनरमा राख्नुहोस्। लम्बाईको साथ यो निम्न कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ: एक सानो स्टोटरको साथ, छाती हटाउनुहोस्, अर्को आधा काट र रस निचोल्नुहोस्। पनीर पछि, बस रस पठाउनुहोस्, सजावटको लागि छील छोड्नुहोस्। व्हाइजको साथमा परिणाम रचना हल गर्नुहोस्, तर व्हिस्क नगर्नुहोस्। जेरेमी ओलिभरलाई अझ के सल्लाह दिन्छ? केक "कोलिब्रिरी" पकाउने3चरणहरु छन्। अब यो पागल देखि एक आभूषण तयारी गर्न व्यस्त छ, र फ्रिज फ्रिज केहि समय को लागि हटाइनु पर्छ।
एक गैर-स्टक फ्राइङ प्यान लिनुहोस्, यसमा चीनी पाउडर राख्नुहोस्, कन्टेनरमा पानीको चम्मच थप गर्नुहोस्। बलियो आगो नबनाउनुहोस्, केही मिनेटमा कुनै पनि अवस्थामा संरचना फोडामा आउनेछ। हलचल को चम्मच को उपयोग न गर्नुहोस, केवल फ्राइंग पैन घुमाएँ, र पाउडर आफु भंग हुनेछ। अब प्यान मा पागल मा जोडें, र अन्त मा एक समुद्री नमक को एक अधिक चुटकी। पर्ची पट्टि लिनुहोस्, त्यहाँ प्यानको सामग्री राख्नुहोस्। जब संरचना ठिक हुन्छ, पेकियनहरू माइल गर्न सकिन्छ।
द्रुत भत्कमा तुरुन्तै संकलन गर्नुहोस्। त्यहाँ कूल तल केक राख्नुहोस् र झीलको एक टुक्रासँग चिकन राख्नुहोस्। त्यसपछि चमक र दोस्रो केक माथि राख्नुहोस्। बेकिंग को माथि स्नेहक। अब टर्न पुगेको छ र पक्कै पनि पतली चिसो पिक्सेल छ - यसको साथ एक केकको सतहलाई सजाय गर्नुहोस्, त्यसपछि ठुलो पेकान राख्नुहोस्। तर यो सबै होइन। आदर्श रूप मा, यो मिठाई खाद्य फूलहरु संग सजाया गएको छ: थाइम, violets, ऋषि, ककडी घास। यसले अद्भुत सुन्दर पार्छ!
यदि तपाईंले यो आंकडा पछ्याउनुहुन्छ भने, निम्न जानकारी तपाईंको लागि उपयोगी हुनेछ। केक "कोलिब्री" (जेमी ओलिभर बाट नुस्खा) एकदम उच्च क्यालोरी हो। प्रयोग गरिएको सामग्रीहरू बीच "राजा" (तेलको बाहेक) विभिन्न प्रकारका स्वादिष्ट डेसर्टहरूका लागि नियमित रूपमा पेक्सन हो । त्यसोभए, एक टुक्राको उपचार 684 केकेलको हुन्छ। तथापि, यस्तो अद्भुत मिठाई साँच्चै योग्य छ कि हामी प्रत्येकको जीवनकालमा एक पटक यो टुक्राको प्रयास गर्दछौं।
ग्लेजहरू बनाउने विकल्पहरू छन्, तथापि, एउटा विशेषता खट्टा सधैं संरक्षित हुनुपर्छ। तुलनाको लागि अर्को समय, तपाईं निम्न घटकहरूको चमक तयार गर्न सक्नुहुन्छ:
खट्टा क्रीम 30% वसा सामाग्री - 300 जी;
क्रीम पनीर - 350 जी;
नींबू -2टुक्राहरू;
पाउडर गरिएको चीनी -2कप;
Cognac - 100 मिलीलीटर।
लेमनले जिरोमीले लिम प्रयोग गरेमा निस्सन्देहीमा समान रूपमा प्रयोग गर्दछ: ती मध्ये एकबाट, छाती हटाउनुहोस्, र अर्कोबाट बाहिरको रस निचोल्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण: यस विधिमा लिटरको आधाको आधा विशेष रूप देखि अवशोषण को लागि संक्रामक संग मिश्रित हुन्छ। शीशे को शेष अवयव मिक्सर संग पीटित हो। यस अवस्थामा, उत्पादनको किनारहरूले पनि चिसोसँगै झरिरहेका छन्।
सजावट बनाउने विकल्पहरू
केक सजाने को अन्य तरिका पनि छन्। प्रयोग गरिएका सामग्रीहरू:
Pecans - 1 कप बिना स्लाइड;
हनी -2चम्मचहरू;
दालचीनी - आधा चम्मच;
Vanilla sugar -2tablespoons।
यस अवस्थामा, कारमेल हनी, दालचीनी र वाइनिनबाट पकाइएको छ, जसमा प्रत्येक अखरोट कर्नेल डिप गरिएको छ, र त्यसपछि केकमा फैलिएको छ। साथै, विकल्पहरू छन् जब कुचल पक्कन बेकिंग को पक्षहरु लाई कवर गर्दछ, र शीर्ष अनलॉक छोड्नुहोस्। राम्रो चिया छ!
बायाँ मा फिर्ता मा दुखाइ के पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ?
को salivary ग्रन्थीहरूको र समस्या तिनीहरूबाट उत्पन्न गर्न सक्छ भन्ने
सिस्टम आवश्यकताहरु सभ्यता: परे धरती। समीक्षा, रिलिज मिति